Забур 119 CARS - Nnwom 119 AKCB
151Awurade, wo de, wobɛn me,
na wo mmara nsɛm nyinaa yɛ nokware.
152Mmere bi a atwa mu no, misuaa wʼahyɛde
a wode tim hɔ sɛ ɛntena hɔ daa no.
Mmoa Ho Mpaebɔ
153Hwɛ mʼamanehunu na gye me nkwa
efisɛ me werɛ mfii wo mmara no.
154Di mʼasɛm ma me na gye me;
kyɛe me nkwa so sɛnea wo bɔhyɛ no te.
155Nkwagye ne atirimɔdenfo ntam kwan ware,
efisɛ wɔnhwehwɛ wo hyɛ nsɛm no.
156Awurade, wʼayamhyehye yɛ kɛse;
kyɛe me nkwa so sɛnea wo mmara no te.
157Atamfo a wɔteetee me dɔɔso,
nanso memman mfii wo nhyehyɛe ho.
158Mehwɛ wɔn a wonni gyidi no a wɔn ho yɛ me nwini,
efisɛ wonni wʼasɛm so.
159Hwɛ sɛnea mʼani gye wo nkyerɛkyerɛ ho;
Awurade, kyɛe me nkwa so sɛnea wʼadɔe te.
160Wo nsɛm nyinaa yɛ nokware;
na wo mmara a ɛteɛ no to rentwa da.
Nya Ahofama Ma Awurade Mmara
161Sodifo taataa me kwa,
nanso ɛyɛ wʼasɛm nko ara na misuro.
162Mʼani gye wo bɔhyɛ ho
te sɛ obi a wanya asade kɛse.
164Mekamfo wo mpɛn ason da biara,
wo mmara a ɛteɛ no nti.
165Wɔn a wɔdɔ wo mmara no wɔ asomdwoe mmoroso,
na biribiara rentumi mma wonhintiw.
166Awurade, metwɛn wo nkwagye,
na midi wo mmara nsɛm so.
167Midi wʼahyɛde so
na medɔ no yiye.
168Midi wo nkyerɛkyerɛ ne wʼahyɛde so,
na wunim mʼakwan nyinaa.
169Awurade, ma me sufrɛ nnu wʼanim;
ma me ntease sɛnea wʼasɛm no te.
170Ma me nkotosrɛ nnu wʼanim;
na gye me sɛnea wo bɔhyɛ no te.
171Ma nkamfo nhyɛ mʼanom ma;
efisɛ wokyerɛkyerɛ me wo hyɛ nsɛm.
172Ma me tɛkrɛma nto wʼasɛm ho dwom,
efisɛ wo mmara nsɛm nyinaa yɛ trenee.
173Ma wo nsa nyɛ krado mmɛboa me,
efisɛ maso wo nkyerɛkyerɛ no mu.
174Awurade, mʼani agyina wo nkwagye,
na wo mmara yɛ mʼanigyede.
175Ma mentena nkwa mu na matumi akamfo wo,
na wo mmara nso awowaw me.
176Mafom kwan sɛ oguan a wayera.
Hwehwɛ wo somfo,
efisɛ me werɛ mfii wo mmara nsɛm no ɛ.